Itekhnoloji yolwelo lwaselwandle lwenitrogen cryopreservation yitekhnoloji entsha yokukhenkceza kokutya kwiminyaka yakutshanje. Ubushushu obuqhelekileyo benitrogen engamanzi yi-195.8 ℃, kwaye ngoku ibonwa njengeyona ndawo ingenabungozi kokusingqongileyo, isebenzayo neyona ndlela yokupholisa eyongayo. Xa ulwelo lwenitrogen kunye nezilwanyana zaselwandle zidibana, umahluko wobushushu ungaphezulu kwama-200 ℃, kwaye ukutya kunokukhenkcezwa ngokukhawuleza kwimizuzu emihlanu. Ukukhenkceza ngokukhawuleza kwenza iikristale zomkhenkce zolwandle zibe zincinci kakhulu, ziphelise ilahleko yokufuma, zithintele ukutshatyalaliswa kwebhaktheriya kunye nezinye iintsholongwane. Ukutya bekungayi kuhlangabezana nayiphi na i-oxidation, i-discoloration kunye ne-rancidity, ngoko ke ukugcina umbala, incasa kunye nezondlo zokuqala; kunye ne-cryopreservation yexesha elide inokugcina incasa engcono.
○ Uyilo lwetreyi ejikelezayo, ukufikelela lula.
○ Ibakala lokutya ukwenziwa kwentsimbi engatyiwa, ngaphezulu kweminyaka eli-10 yobomi benkonzo.
○ Ukufakwa efrijini ngokukhawuleza, ukugcinwa kwexesha elide, iindleko eziphantsi zokusebenza, akukho ngxolo.
○Umlinganiselo ophantsi wokuphuphuma kwenitrogen engamanzi
Itekhnoloji yokufakwa kwe-vacuum ephezulu ye-vacuum iqinisekisa ilahleko ephantsi yolwelo lwenitrogen kunye nexabiso eliphantsi lokusebenza.
○ Itekhnoloji entsha igcina incasa yoqobo
Ulwelo nitrogen umkhenkce ngokukhawuleza, amasuntswana ice crystal ukutya ubuncinci, ukuphelisa ilahleko yamanzi, inqanda iintsholongwane kunye nezinye microorganisms umonakalo ukutya, ukuze ukutya phantse akukho oxidation discoloration kunye rancidity kuphela.
○ Inkqubo ekrelekrele yokuhlola
Inokuxhotyiswa ngenkqubo yokubeka iliso ekrelekrele, ukujonga ixesha lokwenyani lobushushu betanki nganye, ukuphakama kwenqanaba lolwelo, njl.njl., inokuqonda ukuzaliswa ngokuzenzekelayo, zonke iintlobo ze-alarm yempazamo.Ngexesha elifanayo ukubonelela ngenkqubo yolawulo lwempahla, iimpahla kunye ngaphandle kolawulo lokugcina.
Ngaphambili: Ulwelo nitrogen umatshini ice cream
Okulandelayo: Ulwelo itanki yenitrogen ekrelekrele inkqubo yokubeka iliso
UMZEKELO YDD-6000-650 YDD-6000Z-650
Umthamo osebenzayo (L) 6012 6012
Umthamo weNitrojeni yolwelo phantsi kwePalethi (L) 805 805
Ukuvulwa kweNtamo (mm) 650 650
Ubude obusebenzayo bangaphakathi (mm) 1500 1500
Ububanzi bangaphandle (mm) 2216 2216
Ubude Obubonke (Kuquka Isixhobo) (mm) 3055 3694
Ubunzima obungenanto (kg) 2820 2950
Ubude bokusebenza (mm) 2632 2632
Umbane (V) 24V DC 380V AC
Amandla (W) 72 750
ITanki yokuGcina iCryogenic
ITanki yeNitrojeni engamanzi
UGcino lweSeli yeTanki yeNitrojeni elulwelo
ITanki yezoThutho yeNitrojeni engamanzi
Iitanki zeNitogen eziLquid ziyathengiswa
ITanki yezoThutho yeNitogen eyiLquid